Umfundi okhuthazayo, uS’sekelo Zungu.
US’sekelo Zungu – Ugqugquzela Abanye!
Umfundi wezeMfundo, uMnu uS’sekelo Zungu, uqokwe njengomunye wabafundi base-UKZN abavelele abagqugquzela abanye i-Top 40 Inspiring Students ngokuzinikela nothando lwakhe kwezokusiza umphakathi, ubuholi nokuvelela kwezemfundo.
‘Ngiphokophela ukuba ngumholi wezinhlangano ezihluzile ukuze ngisize ukuphucula imiphakathi okuyinto eyenzeka ngemfundo,’ kusho uZungu oyilungu elikhulu le-Golden Key International Honour Society nohlelo i-Academic and Monitoring Mentorship (i-AMS) Programme.
Ubuye abe yilungu le-Community Development Association (i-CDA) Public Speaking, ne-Debate Committee, nePhini lomQondisi weMasakhane Youth Leadership Course.
Ungumeluleki nomehluleli we-Eskom Expo 2019 nomkhulumeli we-Student Christian Fellowship.
UZungu, othanda ukusebenzela umphakathi nobuholi, uqokelwe uhlelo lwe-2020 Activate! Change Drivers - abaholi abancane abakwazi ukuguqula izinto eNingizimu Afrika.
Ungumdidiyeli we-Tomorrow’s Leaders in Training okuyithimba elilekelela futhi libhekane nezinselelo abantu abasha ababhekana nazo ezweni ngenhloso yokubenza baphumelele.
‘Ngithanda ukuzithuthukisa njengomholi kanti akukho okuzonginqanda ukufeza loko,’ kusho uZungu. ‘Ngenhlanhla ngiyakwazi ukugada umsebenzi wesikole nezinto engizenzayo nemisebenzi kungashayisani. Iseluleko sami kwezinye izitshudeni ukusebenza ngokuzikhandla,’ kwengeza yena.
Amagama: ngu-Melissa Mungroo
IDini Entsha Yocwaningo Kwezolimo, Ezobunjiniyela nezeSayensi
Abafundi Bezeshashalazi Benze Ividiyo Efundisayo ngeCOVID-19
Ukufuduka Kuhambisana Nezinga Lokufa Kwabesifazane Abakhulelwe Abahaqwe YiSandulelangculazi